ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စတေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joao Freitas de Camara လာရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | MONREC
ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စတေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joao Freitas de Camara လာရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စတေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joao Freitas de Camara အား ယနေ့ ၉-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အတူ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမင်းမင်းဦး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်း၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ညွန့်သိန်း၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ကျော်လွင် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်သက်၊ ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသက်တင်ညွန့်တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ် ရေရှည်တည်တံ့စွာ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြားအတွေ့အကြုံ၊ နည်းပညာနှင့် နည်းလမ်းကောင်းများ အပြန်အလှန်လေ့လာ၊ ဖလှယ်နိုင်မှုအလားအလာများ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်ယူရာတွင် တွေ့ကြုံနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေရေး အစီအမံများ၊ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုအခြေအနေ၊ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှင့် မှော်ဘီမြို့ရှိ အာရှသစ်တောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ဒေသတွင်းလေ့ကျင့်ပညာပေးရေး သင်တန်းကျောင်း၌ သင်တန်းသားတက်ရောက်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ အနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ခြင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။